Raid – Page 2 – Filimside.net
Maqaal: Raid waa filimka 23-aad ee Ajay Hit u noqdo iyo filimkiisa 37-aad ee u guuleesto
Powerfull Actor Ajay Devgn filimka Raid oo aan xayeysiin loo sameynin sidoo kalena fariin ganacsi xambaarsaneyn ayuu ka dhigay HIT dhameestiran. Ajay Devgn hadda wuxuu isku xijiyay labo filim oo HIT ah waana Golmaal Again […]
Hambalyo Ajay Devgn madaama filimkiisa Raid uu HIT dhameestiran noqday
Shabakada Boxoffice India ayaa xaqiijisay in Super Star Ajay Devgn filimkiisa ugu dambeeyay Raid uu HIT dhameestiran noqday madaama ganacsigiisa mudo sedex todobaad ah uu si wacan isku celiyay. Raid ayaa todobaadkiisa sedexaad keenay 8.75 Crore […]
Business Update: filimka Hichki iyo Raid ganacsiga ay sameeyeen maalintii shalay ahayd (Sabti)
April 1, 2018 Zakarie Abdi
Rani filimkeeda Hichki ayaa ganacsi wacan sameeyay sabtigiisa labaad wuxuuna keenay 2.60 Crore taasi oo ka dhigan wadarta guud inuu soo xareeyay 31 Crore (Trade Figure) sida shabakada BOI soo daabacday. Filimka Hichki ganacsigiisa waxay u badan tahay inuu […]
Rasmi: Ajay Devgn filimkiisa Raid oo Jimcadiisa sedexaad si wacan isku celiyay 100 Crore wuu gaari karaa
March 31, 2018 Zakarie Abdi
Superstar Ajay Devgn filimkiisa Raid ayaa heesto daawadayaal ku filan wuxuuna keenay 1.75 Crore (Trade Figure) Jimcadiisa sedexaad. Raid ayaa ganacsi wacan sameeyay shalay ayadoo Hindiya oo dhan uu qabsaday filimka Baaghi 2 waxaana muuqato in mashruucaan […]
Rasmi: Ajay Devgn filimkiisa Raid oo si wacan isku celiyay todobaadkiisa labaad fursadiisa Hit ahaan ma xumo
March 30, 2018 Zakarie Abdi
Superstar Ajay Devgn filimkiisa Raid ayaa ganacsi wacan sameeyay todobaadkiisa labaad asigoo keenay 25.75 Crore (Trade Figure) wuxuuna sameeyay 57% hoos u dhac ah sida shabakada BOI soo daabacday. Raid mudo labo todobaad ah ganacsigiisa wadarta guud […]
Rasmi: Ajay Devgn filimkiisa Raid iyo ganacsiga uu sameeyay Talaadadiisa labaad
March 28, 2018 Zakarie Abdi
Superstar Ajay Devgn filimkiisa Raid ayaa diidan inuu wax hoos u dhac ah sameeyo maal maha shaqada asigoo todobaadkiisa labaad ku guda jiro. Raid ayaa keenay 2.25 Crore Talaadadiisa labaad taasi oo ka dhigan inuu haatan ganacsigiisa […]
Rasmi: filimka Raid iyo Isniintiisa labaad ganacsiga uu sameeyay
March 27, 2018 Zakarie Abdi
Superstar Ajay Devgn filimkiisa Raid ayaa ganacsi wacan sameeyay Isniintiisa labaad wuxuuna keenay 2.25 Crore (Trade Figure) taasi oo ka dhigan wadarta guud mudo 11-maalmood ganacsigiisa inuu maraayo 77.50 Crore (Trade Figure) sida shabakada BOI soo daabacday. Raid waa hubaal […]
Raid Wadada Haloo Baneeyo Iyo Ganacsiga Uu Sameyay Todobaadkisa Labaad Sedexda Maalmod Ugu Horeysa!
March 26, 2018 Ali Aadan
Super Star Ajay Devgan filmkiisa Raid ayaa ganacsi wacan sameyay todobaadkisa labaad sedexda maalmod ee ugu horeysay isagoo waliba ka ganacsi batay filmka tiyaatarada kucusub ee Hichki. Raid waxuu todobaadkisa labaad sedexda maalmod ee ugu […]
Shabakada Boxoffice India (BOI) ayaa soo daabacday maqaal ay isku bar bar dhigeyso filimada Raid iyo Padman ganacsiga rasmiga ah oo ay sameeyeen todobaadka kowaad. Raid oo hogaamiye ka yahay Ajay Devgn wuxuu sameeyay ganacsi […]
Rasmi: filimka Raid oo sare u kac 50% sameeyay sabtigiisa labaad waana ganacsi heer sare ah
Superstar Ajay Devgn filimkiisa Raid ayaa sameeyay 50% sare u kac ah sabtigiisa labaad wuxuuna keenay 5.25 Crore (Trade Figure) taasi oo ka dhigtay in ganacsigiisa mudo 9-maalmood ah gaaro 69 Crore (Trade Figure). Filimka Raid ganacsiga ugu […]